Posted by စိမ်း... 3.11.09 comments (27)
ပျောက်တယ် ပျောက်တယ် … ပျောက်တာတော့ ဘာပျောက်သလဲ မမေးနဲ့… ပေါ်ကိုမလာတာ… အရင်လို ကိုယ့်ဘာသာပို့စ်လေး မတင်ဖြစ်ရင်တောင် တခြားဘလော့ဂ်တွေလိုက်ဖတ် လိုက်မန့်လုပ်နိုင်သေးတယ်… မလုပ်နိုင်ဆို ပြောရရင် အိမ်ပြန်ဖို့ဗျို့…
သိတဲ့အတိုင်း ၀ယ်ရခြမ်းရတာနဲ့ အားကိုမအားဘူး… အလုပ်သင်ကလည်း စနေနေ့ည ၃ နာရီထိဆင်းရသေးတယ်လေ… အိမ်ရောက်တော့ မနက် ၄ နာရီ… တနင်္ဂနွေနေ့တော့ အိမ်မှာအတူနေတဲ့အစ်မက ဈေးဝယ်တာအဖော်လိုက်ပေးတယ် အိပ်ယာထတာက ၁၁ နာရီ… သူကလည်းပျင်း ကိုယ်ကလည်းပျင်းနဲ့ ညနေ ၃ နာရီကျော်မှ အိမ်ကထွက်ဖြစ်တယ်… ပစ္စည်းပေါပေါလောလောရတဲ့ Bugis မှာသွားကြည့်တာ… လား လား နည်းတဲ့လူတွေမှ မဟုတ်တာ… ကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးနေတာပဲ… မီးပွိုင့်ကနေလမ်းကူးဖို့စောင့်နေတဲ့နေရာမှာတင် ငါးပိသိပ်၊ ငါးချဉ်သိပ်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေ အပြင်မထွက်ဖူးတော့ ကိုယ့်အတွက်အထူးအဆန်းဖြစ်နေရော… လူတွေကလည်း များလွန်းတော့ တစ်နေရာတစ်နေရာ သွားရတာ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဘူး… တစ်လှမ်းတစ်လှမ်းတိုးဖို့ကို မနည်းရွှေ့ရွှေ့နေရတာ… ဒါနဲ့စိတ်ကလည်း နောက်လာရော… တော်ပြီ အစ်မရာ နောက်နေ့မှလာတော့မယ်ဆိုပြီးထွက်လာပြန်ရော…
အဲ့ဒီအစ်မရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်မွေးနေ့ကို East Coast မှာလုပ်ဖို့ ဖိတ်ထားတာရှိတယ်… ကိုယ်နဲ့လည်းမသိပဲနဲ့မလိုက်ချင်ဘူးဆိုတော့ မဖြစ်မနေလိုက်ရမယ်လို့ တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ကြောင့် ယက်ကန် ယက်ကန်နဲ့ပါသွားပြန်ရော…. Bugis ကနေ Eunos ကို MRT စီး… အဲ့ဒီမှာ နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယေက်နဲ့ချိန်းထားလို့ …ပြီးတော့ သုံးယောက်သား အအေးဗူး ၆ ဗူးဝယ်ပြီး East Coast ကို Taxi နဲ့ ချီတက်ကြလေသတည်း… ဟိုရောက်တော့ အအေးဗူးတွေရယ် အိမ်ပြန်လက်ဆောင်အထုတ်တွေရယ် မနိုင်မနင်းသယ်ပြီး ရေခဲအရှာထွက်ကြတယ်… seven eleven မှာ ၀င်ကြည့်တော့ ရေခဲက လေးထောင့်ဗူးလေးနဲ့ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ငါးဆယ်ဖိုးလောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်… စလုံး၂ ကျပ်နဲ့ ၇၅ ပြား တဲ့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ရှိတာပဲ ၀ယ်ခဲ့ရတာပေါ့… ၂ဗူး ၅ ကျပ်ခွဲ …NTUC မှာဆို အထုတ်အကြီးကြီးတစ်ထုတ်လုံးမှ ဘယ်လောက်မှမရှိဘူး…. အဲ့လိုမနိုင်မနင်းသယ်ပြီးတော့ ရှာတယ် ရှာတယ် barbecue pits 18 .. မတွေ့ဘူး… ရောက်နေတာ 32 တဲ့ … ဖုန်းလား.. ဆက်တယ်လေ… McDonald ကနေ ညာဘက်ကိုပဲ လျှောက်တာပဲ… ကျောက်ဆောင်ကြီးနားမှာ…?? အင်း တွေ့တယ် ကျောက်ဆောင်ကြီး ဒါဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပြီ နီးလာပြီထင်တယ်… လျှောက် လျှောက် လျှောက် မဟုတ်သေးဘူး နံပါတ်တွေက ကြီးကြီးလာတယ်… ဖုန်းထပ်ဆက် … သေရော… ကမ်းခြေဘက်ကိုမျက်နှာမူရင် ညာဘက်ကိုလျှောက်ရမှာတဲ့… ကဲ… မထူးတော့ဘူး စက်ဘီးသာ ငှားပြီးသယ်ပေတော့… လူက ၃ ယောက် နှစ်ယောက်ဘီးတစ်စီး တစ်ယောက်ဘီးတစ်စီး… ၁၄ ကျပ်ပေးရတယ်… ၈ နာရီ ပြန်အပ်ရမယ်ဆိုလား…. စက်ဘီးကိုစီးတတ်တဲ့လူက တစ်ယောက်တည်း ကိုယ်ကတော့ ကလေးတွေစီးသလို နောက်မှာ အထိန်းဘီးလေးပါရင် စီးတတ်တယ်… :P:P:P
အတူနေတဲ့ အစ်မကလည်း မစီးတာကြာလို့တဲ့ သိပ်မစီးရဲဘူး ဒါနဲ့ပဲ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်စီးပေါ့… အစ်မက နောက်ကလိုက်တယ် နှစ်ယောက်ဘီးနဲ့ ပစ္စည်းတချို့ကျန်ခဲ့တယ် ကိုယ်ကတော့ စက်ဘီးနဲ့ ပစ္စည်းစောင့်ပေါ့… ဗိုက်ကလည်းတော်တော်ဆာနေပြီ… ရေလည်းဆာတယ် အအေးဗူးတွေက ကိုယ့်ဆီမှာ… ဒါပေမယ့် ခွက်နဲ့ ရေခဲမရှိဘူး ရပါတယ် အဆင်ပြေသလိုပေါ့… ဒီတိုင်းမော့ချလိုက်တာပဲ… နောက်လူသောက်ချင်သောက် မသောက်ချင်နေ… ဟီ ဟိ …
ခဏနေတော့ မွေးနေ့ရှင်ဆိုတဲ့ အသားဖြူဖြူကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ် ခုနက စက်ဘီးစီးတတ်တဲ့တစ်ယောက်ရယ် အဲ့ဒီဘီးကြီးနဲ့ ပြန်ရောက်တာတယ် မွေးနေ့ရှင်က ကိုယ့်ကိုတင်နင်းရတာပေါ့ ဟီး … ကျန်တဲ့တစ်ယောက်က တစ်ဘီး … ဒါနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးတော့ အောင်မြင်စွာရောက်လာခဲ့လေသည်ပေါ့… ကြာဇံကြော်ပါတယ် ၀က်သားတုတ်ထိုးပါတယ်… အကင်တွေလည်းပါတယ် အသီးအနှံတွေ အအေး ဘီယာ မိန်းကလေးတွေအတွက် ၀ိုင်လည်းပါတယ်… လူကတော့ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု ရောက်လာတာပဲ တစ်စုနဲ့တစ်စုလည်းမသိဘူး…စားသောက် မိတ်ဆက် နောက်ဆုံးတော့ ဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုမယ်တဲ့… တီးမယ့်လူကလည်း နုတ်စ်တွေအလွတ်မရ.. ဆိုတဲ့လူတွေလည်း စာသားတွေအလွတ်မရ… တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်… ပျော်ဖို့.. တကယ်ပြောတာ… ဗြုတ်စဗြင်းတောင်းတွေချည်းပဲ… လူလတ်ပိုင်းလောက်ရှိတဲ့ အန်တီကြီးက စိုင်းထီးဆိုင်တို့ ကိုင်ဇာသီချင်းတို့ မတီးတတ်လို့ ဂစ်တာတီးတဲ့ကောင်လေးကို ညိုညင်သေးတယ်… ဂစ်တာသမားရတာက လေးဖြူ အငဲ မျိုးကြီး သီချင်းတွေ … ဆိုမယ့်လူတွေက ၀ိုင်ဝိုင်း၊ အာဇာနည်၊ ကိုင်ဇာ တဲ့ ဒါတောင် ချစ်ဦးမောင့်ထံပြန်လာပါ ဆိုချင်တဲ့လူက ရှိသေးတယ်… မွေးနေ့ရှင်ကောင်မလေးကိုယ်တိုင် ဂစ်တာတီးပြီးဆိုပြတဲ့ အကြီးတစ်လုံး အသေးတစ်လုံးဆိုတဲ့ သီချင်းကိုတော့ အဲ့ဒီ့နေ့ကမှ ကြားဖူးတယ်…. ခဏတဖြုတ်နေပြီး ၁၀ နာရီထိုးတော့ ပြန်ခဲ့ကြတယ်… ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ပါတယ်… သူတို့ခွင့်ပြုချက်လည်းမတောင်းခဲ့ဘူး နောက် ကိုယ်ဘလော့ဂ်ရေးတာလည်း သူတို့မသိဘူးလေ… မတင်တော့ဘူး…
နောက်ရက်လည်း ဒီလိုပဲ… ၀ယ်ရခြမ်းရ… အလုပ်သင်က supervisor ရယ် floor captain ရယ် နောက် part-timer တစ်ယောက်ရယ် သူတို့နဲ့ကတော်တော်လေး ရင်းနှီးနေတော့ မပြန်ခင် ပင်နီဆူလာမှာ ထမင်းဖိတ်ကျွေးတာ… ဘယ်ဆိုင်မှာစားချင်လဲရွေးဆိုတော့ ၀င်သွားပါတယ် တည့်တည့်ကြီး … မြေအောက်ထပ်က ကိုယ်တောင်တစ်ခါမှ ရှေ့ကဖြတ်မလျှောက်ရဲတဲ့ နာမည် ၂ လုံးနဲ့ ဈေးကြီးကြီးဆိုင်ထဲကို … menu ထဲက Price list ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်နည်းနည်းလန့်သွားတယ် … ကံကောင်းလို့ ညနေကမှ ကုမ္ပဏီမှာ လခကို ချက်လက်မှတ်နဲ့ သွားထုတ်ပြီး ဘဏ်မှာလဲထားတာ… ပုစွန်မကျည်းချဉ်စပ်၊ ကြက်သားဟင်း၊ မှိုကန်စွန်း၊ ဗူးသီးကြော်သုပ် စတော်ဘယ်ရီသီးဖျော်ရည် ၂ ခွက်၊ သံပုရာရည် ၂ ခွက်။ ထမင်းနဲ့ ဟင်းသုံးမျိုးကုန်တော့မှ ဟင်းရည်နဲ့ ကြက်သားဟင်းကို ၃ ခေါက်မြောက်မှာပြီးရောက်လာပါတယ်… ဒါတောင် မီးဖိုထဲဝင်ဆွဲလာလို့ ရတာဆိုပဲ အောင်မလေး ကံထူးပေလို့ပေါ့ နို့မဟုတ်ရင် မနက်ဖြန် မနက်မှ ရမလားပဲ…. စင်ကာပူ ဘုံပိုင်ကလာတဲ့ရေတော့ အလကားရတယ် … ရောက်ရောက်ချင်းရေခွက်လေးတွေအရင်ချပေးတယ်… ကုန်သွားရင်လည်း လိုက်ဖြည့်ပေးတယ်… ဒါတော့ မဆိုးပါဘူး ဟုတ်တယ်လေ စလုံးမှာ တစ်ခါမှ ရေအလကားမသောက်ရဖူးဘူး ဒါပထမဆုံးပဲ… စားသောက်ပြီးတော့ စူပါဗိုက်ဇာက ပိုက်ဆံရှင်းဖို့ကောင်တာကိုထသွားတော့ ကိုယ်ကလည်း အပြေးလိုက်ပြီး အတင်းပေးရတာပေါ့ cashier အစ်ကိုကြီးကို… အစ်ကိုမယူနဲ့ ညီမရှင်းမယ်လို့ ဗမာလိုပြော supervisor ကလည်း သူ့ဆီကယူပါလို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြော… အဲ့ဒီ့အစ်ကိုကြီးက ပြန်ပြောပါတယ် ဗမာလိုပဲ ကိုယ့်ကိုတော့မကြည့်ဘူး ကိုယ့်စူပါဗိုက်ဇာကိုကြည့်ပြီး အားရပါးရ ပြုံးပြောတယ်… ညီမကလည်း သူပေးမယ်တဲ့ သူ့ဆီကပဲ ယူလိုက်မယ် .. တဲ့.. ကိုယ့်မှာ ရယ်ချင်စိတ်ကိုမနည်းကြီးအောင့်ထားရတယ်… ဒါနဲ့ အဲ့ဒါပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကိုပြန်သွား… clarke quay မှာလေ နီးနီးလေးပဲ လမ်းလျှောက်သွားတာပေါ့ … Nectarie တဲ့ ဆိုင်နာမည်က … dessert တွေချည်းရောင်းတာ … ဈေးတော့ကြီးတယ်… ဟိုရောက်တော့ ကျန်တဲ့နောက်စူပါဗိုက်ဇာတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်… သူက ကိုယ်တို့အတွက် chocolate fondue တစ်အိုးလုပ်ပေးတယ် … တစ်ခါအဲ့ဒီကနေ ဓါတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်ပြုပြီးပြန်တော့ ဘေးက yello Jello ၀င်.. သူက retro bar တဲ့ ရိုးရိုး bar နဲ့ဘာကွာလဲတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူး.. ကုမ္ပဏီတူတူပဲလေ ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ထားတာဆိုတော့ supervisor က သူ့ staff card နဲ့ Discount ရတယ်ဆိုပြီး beer တစ်ဂျားမှာတယ် သူတို့သုံးယောက်စာပေါ့ ကိုယ့်အတွက် Mango Mocktail တစ်ခွက် … bar ဆိုတော့ Non-alcoholic က ဒါပဲ ရှိတယ်… အဲ့ဒီမှာထိုင်စကားပြောပြီး အိမ်ကို သူတို့ပဲ ကားငှားပြီးလိုက်ပို့ပေးတယ် ကိုယ်ကကျွေးမယ်ပြောပြီးသာ ဖိတ်လိုက်တယ် အကုန်သူတို့ချည်းရှင်းသွားကြတာချည်းပါပဲ…. မျက်နှာတောင်ပူတယ်… ကိုယ်ကတော့ floor cap နဲ့ supervisor အတွက် Vivo ကနေ သူတို့နာမည်လေးတွေကို ph key chain လေးတွေလုပ်သွားပေးတယ်… အံမယ် ဒါလေးက ဘာမှသာမဟုတ်တာ…၃၀ ကျော် ရှင်းလိုက်ရတယ်.. ကြည့်တော့ သေးသေးလေး မလောက်လေး မလောက်စားနဲ့… ဈေးကတော့ အလာသား… ဘန်ကောက်မှာတော့ ဈေးသက်သာတယ်ပြောတယ်…
ဒီနေ့လည်းထပ်ရောက်တယ်လေ အဲ့ဒီ bugis ပဲ.. ၀ယ်စရာလေနည်းနည်းပါးပါးကျန်သေးလို့… အိတ်လိုချင်လို့လိုက်ရှာတာ ကြိုက်တာကိုမတွေ့ပါဘူး… လူကလည်းကြိုက်တတ်တယ် … အိတ်ကလေးလှလိုက်တာလို့ ကြည့်လိုက်ရင် 369.90 တို့ 349.90 တို့ချည်းပဲ … တန်ရာ တန်ရာ မှန်းမှပေါ့ ဟုတ်ပါ့… နောက် ၃ နှစ်နေလို့ ၀ယ်နိုင်ရင် ကံကောင်း .. ခက်တာက စိတ်ပဲ… မျက်စိထဲလှပါတယ်လို့ ဈေးကြည့်လိုက်ရင် အဲ့လို … သိပ်အကောင်းမကြိုက်တတ်ရှာဘူး… ရှာတယ် ၃၀ အောက်… မတွေ့ဘူး… BHG ကုန်တယ်… Bugis street ကုန်တယ် မတွေ့ဘူး မတွေ့တော့လည်း မ၀ယ်ဘူးပေါ့… လက်ဆောင်ပေးဖို့ အတွက်ပဲ3for 10 မှာ တွေ့တာတွေ ကောက်ဆွဲလာတယ် … ဘတ်ဂျတ်ကအခြေအနေသိပ်မကောင်းတော့ စာရင်းထဲမပါတာဆိုလုံးဝမ၀ယ်ပါဘူးလို့တားနေတဲ့ကြားက Maybelline က discount ချတယ်… ကုန်တာပေါ့ ဘာပြောကောင်းမလဲ… ဟိုလောက်ဖိုးပြည့်ရင် ဒါလေး လက်ဆောင်ရမယ် ဘာရမယ် ညာရမယ်… ကုန်ပြန်ပြီပေါ့ …ရတော့ရတယ် လက်ဆောင် မှန်ကလေးရယ်၊ ဖုန်းကီးချိန်းရယ်၊ ပါးနီတစ်ဗူးရယ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးရယ် မဆိုးပါဘူး လက်ဆောင်တွေရတယ်ဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့… ကိုယ့်အထုတ်အပိုးတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ကြီးနဲ့ လမ်းလျှေက်ရတာ အဆင်မပြေပါဘူးဆိုနေမှ ရှေ့ကနေလာပိတ်ရပ်တယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားတာလား အခု ဒီမှာဒစ်စကောင့်တွေချနေပါတယ် ဘယ်နှခုဝယ်ရင် ဘယ်လောက် ဘာတွေ လက်ဆောင်ပေးတယ် ဘာတွေ ညာတွေ သူများ အလေးကြီးသယ်ထားရတာမှ အားမနာလျှာမကျိုး သူပြောချင်တာချည်းလွှတ်ပြောနေတာ… ဟင့်အင်း မျက်ကပ်မှန် မတပ်ပါဘူး နောက်တော့မှ လာကြည့်တော့မယ်ပြောပြီး မရမက အတင်းထုတ်ဆီးတိုးသလို တိုးထွက်လာရတယ်… ကျောင်းကိုလည်း ပါ့စ်ပြန်အပ်ရသေးတယ်လေ cancellation လုပ်ဖို့… ၆နာရီလောက်တော့ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်… ဒီနေ့တော့ မဖြစ်မနေ ပို့စ်တင်ပြီး အကြောင်းကြားမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ အထုတ်အပိုးကမန်းကတန်းပြင်ပြီးတာနဲ့ တန်းရေးရတာပဲ လုပ်စရာတွေကလည်း ရှိသေးတယ်လေ…
ဒါကတော့ အခုတလော စိမ်း ပျောက်နေရခြင်းအကြောင်းအရင်းများရှင်းတမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်... ဓါတ်ပုံတွေလည်း မတင်နိုင်၊ စာလုံးပေါင်းရော အရေးအသားရော မစစ်ခဲ့နိုင်ပါဘူး အမှားပါလျှင် ကိုယ့်သာသာ ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကြပါကုန်… :P
မနက်ဖြန်မနက်လေယာဉ် … ၂ ပါတ်ကြာပါမယ်… ရန်ကုန်ကနေတော့ ပို့စ်မတင်ဖြစ်ပါဘူး ရသမျှအချိန်တွေ အိမ်မှာပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါ…
ပြန်လာမှ တွေ့ကြမယ်… ရန်မဖြစ်ရဘူးနော် လိမ်လိမ်မာမာနေခဲ့ကြ... ကြားလား... ဟီး... :P
Posted by စိမ်း... 26.10.09 comments (13)
တိမ်းတမ်း ရှောင်တမ်း ကစားမနေပါနဲ့တော့
နင်ငြိမ်းမှ သေမယ့် မီးအတွက်
P.S : ကဗျာမရေးဘူးလားလို့ လာလာမေးနေတဲ့ အနော့်ကို အားနာလို့ တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
Posted by စိမ်း... 23.10.09 comments (19)
Alarm မြည်သံကြောင့် ကိုယ်နိုးနိုးချင်းသတိထားမိတာက…အစာအိမ်ပြဿနာ … ဒါနဲ့ပဲ ခပ်မြန်မြန်ပဲ မျက်နှာသစ် သွားတိုက်ခြင်းကိစ္စတွေလုပ်လိုက်တယ်… ပြီးတော့ Breakfast အတွက် Coffee mix တစ်ထုပ်ကို Dawn နို့ဆီလေး နည်းနည်းထည့်ပြီးဖျော်လိုက်တယ်… Early morning မှာ ဒီလိုကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်က ကိုယ့်ကို တစ်နေ့တာလုံးအတွက် Fresh ဖြစ်စေတယ်လေ… ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ပြီး Gurdian သတင်းစာကို ဆွဲယူဖတ်နေလိုက်တယ်… Heading တွေကြည့်ရတာတော့ သိပ် Interesting ဖြစ်စရာမတွေ့ဘူး… Jargon တွေကိုလည်း ကိုယ်ကသိပ်နားမလည်ဘူးလေ… သတင်းစာဖတ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါ Kitchen ထဲသွားပြီး Lunch အတွက်ပြင်ဆင်ရပြန်သေးတယ်… ဟင်းချက်နည်းတွေသိပ်များများစားစားမသိတဲ့ကိုယ့်အတွက် ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိလှဘူး… ကိုယ့်စိတ် Menuကိုယ်လှမ်းဖတ်ပြီး ဘာချက်ရမလဲစဉ်းစား… အစကတော့ ကိုယ်ချက်တာကိုယ်လုံးဝစားလို့မရပေမယ့် အခုတော့ ကိုယ့်လက်ရာက Normal လောက်တော့ ဖြစ်လာပြီပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်… ရေခဲသေတ္တာထဲကို ရှာဖွေရေးလုပ်လိုက်တယ်… Oops ဘာမှလည်း မကျန်ပါလား… တော်သေးတာပေါ့ တစ်နပ်စာလောက် ကပ်သပ်ကျန်နေတဲ့ Pork ကိုပဲ Quickly ချက်ဖြစ်တယ်…. Rice လည်းတည်ရသေးတာပေါ့… ညနေတော့ Supermarket သွားရမယ်ထင်တယ် မီးဖိုချောင်အတွက်လိုတာတွေသွားဝယ်ဦးမှပါ… Train စီးရမှာပျင်းတော့ Usuallyဆိုရင် လက်ဆောင်တွေဘာတွေရတဲ့ Voucher တွေဘာတွေမပေးလဲ နီးနီးနားနား အိမ်နားက Wet market ပဲ သွားဖြစ်တယ်... အလုပ်နဲ့အိမ် ၊အိမ်နဲ့အလုပ်… မအားလိုက်နဲ့ အားတာနဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲ ကုပ်နေတဲ့ကိုယ့်ကို အတူနေတဲ့အစ်မတွေက Xenophobia ဖြစ်နေတယ်လို့တောင်ပြောကြသေးတယ်…
Yahooooooo …. ဟေ ဟေ့ ပြီးခါနီးပြီကွ … ဦးနှောက်စားအောင်လုပ်တဲ့ သံလွင်ဟီးရိုး … ညကလည်း ကောင်းကောင်းမအိပ်ရပါဘူးဆိုမှ… တော်ပြီ… အလုပ်မသွားခင် တစ်ရေးလောက်ပြန်နှပ်လိုက်ဦးမယ်… ZzzZzZz ……. :D
Posted by စိမ်း... 20.10.09 comments (22)
မနက်အစောကြီးထ၊ အခန်းပြတင်းပေါက်ကလိုက်ကာတွေကို ဘေးတဖက်တချက်ဆီကို ဆွဲဖယ်၊ ပြတင်းမှန်ကိုဖြတ်ပြီး ကျနော့်မျက်နှာကို နှုတ်ဆက်နမ်းမယ့် နေမင်းရဲ့ အကြင်နာရောင်ခြည်တွေ မက်မက်မောမောခံယူခြင်းဖြင့် ကျနော့်နေ့သစ်ရဲ့ နံပါတ်စဉ် ၁ ကို စမယ် …
ရေချိုးခန်းထဲမှာ အငဲ ဒါမှမဟုတ် လေးဖြူရဲ့ အပြင်းစားရော့ခ် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အကျယ်ကြီးအော်ဆိုပြီး မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက် ရေမိုးချိုးပြီး ကျနော့မျက်နှာက အမွေးအမျှင်တစ်ချို့ကို cleansing foam၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးနဲ့ ရှင်းလင်းရမယ်… သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေရတာကို ကျနော်ကြိုက်တယ်လေ… မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေနဲ့ဆို ကျနော့်မျက်နှာက ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုရင့်ရော်နေသလိုဖြစ်နေမှာ…
ရင်ဘတ်မှာ smiley ပုံပါတဲ့ အစိမ်းရောင်တီရှပ်တစ်ထည်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်တစ်ထည်ကိုကောက်စွပ်ပြီး ဆံပင်ကိုလည်း ဂျယ်နည်းနည်းသုံးပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သွားအောင် ပုံသွင်းပြီးရင်တော့ လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မလိုင်နံပြားနဲ့ လက်ဖက်ရည်ကျစိမ့်က ကျနော့ရဲ့ ၀မ်းတစ်ထွာကို နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်ထိတော့ အသံပိတ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်…
ဆိုင်ကဖွင့်ထားတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ တောဂေါ်လီသီချင်းကို လိုက်ညည်းရင်း ရုံးသွား၊ ကျောင်းသွား၊ ဈေးသွား ဖြတ်သွားသမျှကောင်မလေးတွေရဲ့ မနက်ခင်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အလှကို ခံစားမယ်…. ဘော်ဒါတစ်ယောက်တစ်လေတွေ့ရင် (ကိုယ်ကစိုက်ရှင်းရမယ့်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်) လက်ခေါက်မှုတ်ပြီး ဆိုင်ထဲလှမ်းခေါ်မယ်၊ ပြီးရင်ပရီးမီးယားလိဂ်အကြောင်း၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်အကြောင်း၊ လာလီဂါ၊ အီတလီစီးရီးအေနဲ့ ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာ ကုလသမဂ္ဂဆွေးနွေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျနော်တို့က ကိုယ့်လောက်မှမသိတဲ့ ဘောလုံးနည်းပြတွေ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့ လမ်းပေါ်က ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ အိပ်ဇောပိုက်သံ တဝေါဝေါနဲ့ အပြိုင် ဘိုလိုတစ်လုံးတစ်လေညှပ်သုံးပြီး ဘေးနားကလူတွေအထင်ကြီးအောင် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ဝေဖန်မယ်…
နောက်ပြီးရင်တော့ ကျနော့်ရဲ့သူမ သင်တန်းသွားမယ့်အချိန် လမ်းထိပ်မှာသွားစောင့်ကြိုပြီး သင်တန်းထိရောက်အောင် လိုက်ပို့ရင်းနဲ့ စကားတွေပြောမယ်ဗျာ… မနက်စာကို သူမဘာစားခဲ့သလဲ ကျနော်ဘာစားခဲ့တယ်… ညက အိပ်မက်ထဲမှာ သူပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့.. အဲ့ဒီအခါသူမက ကျနော့်ကို ပြုံးမယောင် နှုတ်ခမ်းတစ်စုံနဲ့ အလှဆုံးမျက်စောင်းတစ်ခု ကျနော့်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးခမ်းနားသွားအောင် စွန့်ကျဲလိမ့်မယ်… ခုနကဆိုင်မှာတုန်းက ကောင်မလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်တာတော့ သူမကိုပေးသိလို့မဖြစ်ဘူး… သူမဟာ သ၀န်တိုတာကို ဘယ်တုန်းကမှထုတ်ပြတတ်သူမဟုတ်ဘူးလေ… ရင်ထဲမှာသိမ်းထားတတ်တဲ့သူက ပိုပူလောင်တာကို ကျနော်ကောင်းကောင်းနားလည်တာပဲ… သူမလက်ထဲမှာ ပိုက်ထားတဲ့ ဖိုင်တွဲလေးကိုကျနော်က ကိုင်ထားပေးရင်း ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ သူမမျက်နှာကိုနေထိုးတဲ့အခါ ဖိုင်ကလေးနဲ့ ကာပေးထားမယ်… သူမရဲ့ ``လက်ညောင်းနေမှာပေါ့ ´´ ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကြားရဖို့ ကျနော်ဒီလောက်တော့ အရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်ရလိမ့်မပေါ့… ငါးပိသိပ် ငါးချဉ်သိပ်ကျပ်ညပ်နေတဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ… သူမကို လူတိုးမခံရအောင် ကျနော်က ကာထားပေးမယ်… တစ်ခါတစ်ခါ ကားဘရိတ်အုပ်လို့ ကျနော့်မေးဖျားကို သူမခေါင်းကလေးလာတိုက်မိတဲ့အခါ…`` နာသွားလား ဥုံဖွ… ´´ လို့ သူမက လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ပြောလိမ့်မယ်… အဲ့ဒီအခါ ကျနော့်ရဲ့တခွိခွိနဲ့ ကြိတ်ရယ်သံကြောင့် ဘေးကလူတွေလှည့်ကြည့်လို့ သူရှက်ရင် မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး ကျနော့ ဗိုက်ခေါက်ကို သတိပေးသလို မနာအောင် လှမ်းဆိတ်တတ်သေးတယ်…
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်မိရင်ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်းသီချင်းထဲကစာသားတွေကို ကျနော်အခုမှပဲ တကယ်သဘောပေါက်တော့တယ်… အချိန်တိုင်းမှာသူမနဲ့အတူရှိနေချင်တော့တာပဲ… သူမသင်တန်းတက်နေချိန်ဆို ကျနော် သင်တန်းအောက်က အအေးဆိုင်လေးမှာ သင်တန်းဆင်းတဲ့အချိန်ထိထိုင်စောင့်နေမယ်… သင်တန်းဆင်းလို့ လူတွေအလျှိုလျှိုထွက်လာကြတဲ့အထဲက သူမကိုမြင်လိုက်ရရင်ပျော်တဲ့အပျော်ဟာ ဘာနဲ့မှမတူဘူးဗျာ… ကျနော် သူမရဲ့ နှုတ်ထွက်အမိန့်မှန်သမျှကို နာခံမယ် … ဘိသိက်မခံထားတဲ့ ကျနော့်နှလုံးသား ဧကရီဘုရင်မ သူမအား ကျနော်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှယောက်ျားတွေထဲက တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်ရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူမကိုသိစေချင်တယ်… သူမ ချစ်တဲ့လူက စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော် သက်သေပြချင်တယ်… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာ မြတ်နိုးတဲ့အရာ ချစ်ခင်စုံမက်တဲ့အရာကို ဆုံရှုံးရတာ ယုံကြည်ချက်တွေ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လောက်နာကျင်ခံခက်သလဲဆိုတာ ကျနော်သိနေလို့ပဲ… ကျနော် သူမကိုမနာကျင်စေချင်ဘူးလေ…
သူမရဲ့သင်တန်းအချိန်ဇယားနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်၊ သူမနောက်ဆုံးဈေးဝယ်ထွက်တဲ့နေ့ နဲ့ ၀ယ်နေကျ အကျီဆိုင် ဆိုတာတွေက ကျနော့်မှတ်ဥာဏ်တွေထဲမှာ အကန့်လိုက်အကန့်လိုက် သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ နေရာပေးပြီးမှတ်သားထားမယ်…နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်ဟာ သူမကို ပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုရင် ကျနော်ဟာ တစ်သက်လုံးနှင်းဆီခင်းထဲမှာပဲ အရိုးထုတ်တော့မယ် သူမအပျော်တွေကို ကျနော့်လက်နဲ့ တစ်ယုတစ်ယ တစ်ပွင့်ချင်းကိုပျိုးချင်လို့… နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူမမွေးနေ့တိုင်းမှာ ဘုရားအတူတူတက်မယ်… ငါးကလေးတွေ ငှက်ကလေးတွေကို သူမသက်စေ့လွှတ်ပြီး တစ်နှစ်တစ်မျိုးမရိုးတဲ့ အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေပေးမယ်… ကျနော့်မွေးနေ့တိုင်းမှာလည်း မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် သူမလက်ရေးနဲ့`ချစ်တယ်´ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ကတ်တစ်ခု မရရအောင်တောင်းမယ်… ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ပါးစပ်ကပြောခဲလွန်းတဲ့သူမဆီကနေ ကျနော်အမက်မောဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခု ဆိုရင်လည်းမမှားဘူး… တစ်နှစ်ကို တစ်ခုနဲ့ အခု လေး၊ ငါး၊ ခြောက်ဆယ် အထိ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျနော်စုထားမယ်… နောင် သားသမီးမြေးမြစ်တွေရတဲ့အထိပေါ့…
ကျနော့်ဖုန်းကိုလည်းပိတ်ထားပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဆက်သွယ်ရေးက ဘီလ်မဆောင်လို့ ပိတ်ထားတယ်လို့ပြောမယ်… သူမနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်တွေကို ဘယ်လိုမှတ်တစ်ကောင် ခြင်တစ်ပိုင်းကမှ နှောက်ယှက်တာမျိုးကို ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး … သူမဘေးနားရှိနေတဲ့ နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်တိုင်းကို ကျနော် တန်ဖိုးထားမယ်… သူမဘ၀ရဲ့ စက္ကန့်တွေ စက္ကန့်တွေတိုင်းကို ပျော်စရာတွေချည်း ဖန်ဆင်းပေးနိုင်သူဖြစ်ချင်တယ်… ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးနေရာတွေမှာ သူမကို တစ်၊ နှစ်၊ သုံး ဖြစ်စေမယ် … သူမ မျက်လုံး၊ အပြုံး နဲ့ ရာသီတွေအကုန်လုံးမှာ ဘ၀ကို လုံးလုံးပုံအပ်ထားလိုက်တော့မယ်… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမဟာ နှစ်အဆက်ဆက်တိုင်အောင် ကျနော်အိမ်ပြန်အလာကို သစ္စာရှိရှိစောင့်နေမယ့် နတ်သမီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော် အသေအချာသိနေလို့ပဲ…
ရှင် မသိပါဘူး… ဒါတွေ ရှင်မသိဘူး…
ဟုတ်တယ်… ရှင်က ယောက်ျားလေးပဲလေ…
မတော်တဆတစ်ခုပါ.. လို့ ရှင့်ပါးစပ်က လွယ်လွယ်ပြောထွက်တဲ့ တောင်းပန်တဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ရှင် ပြုခဲ့သမျှအပြစ်တွေကို ကျမခွင့်လွှတ်မယ်လို့ ထင်ရင်တော့ ဆောရီးပဲ… ရှင်ထင်တာမှားတယ်… ရှင်ပြန်လာတာ မဆိုစလောက်လေး နောက်ကျသွားတယ်… ဒီ့ထက်နည်းနည်းစောရောက်ခဲ့ရင် ရှင်ထင်သလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့… အခုတော့ ကျမဟာ ပြောသမျှခေါင်းညိတ်တတ်တဲ့ သူငယ်နပ်စားလေးမဟုတ်တော့ဘူး… ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေက တစ်ဘ၀လုံးစာ ရင့်ကျက်စေဖို့လုံလောက်ခဲ့ပြီးပြီလေ…
အဖြူ အနီ အပြာ တစ်ခါနဲ့တစ်ခါ ကာလာအရောင်ကွဲချင်ကွဲမယ်… ဒါပေမယ့် မာယာဆိုတာတော့ ကျမသေချာသိနေလေရဲ့… မိန်းကလေးတွေရဲ့ နှုတ်ကထွက်တဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကိုရှင်နားမလည်ပါဘူး… ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အစစ်အမှန်ချစ်ကြည့်ဖို့ တစ်ချက်ကလေးတောင် စိတ်မကူးခဲ့ဖူးဘူး … နှလုံးသားနဲ့ရင်းတဲ့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းက ပစ်ခွင်းတဲ့မြှားချက်က ဘယ်လောက်ပြင်းတယ်ဆိုတာ ရှင်မှမသိပဲ…
အင်းပေါ့လေ ရှင်ကယောက်ျုားလေးကိုးး ….
ဒါဟာ ကျိန်စာတစ်ခုဆိုရင် မိန်းမသားတွေဟာ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ကျိန်စာသင့်နေသူများလားကွယ်…။။။။
မှတ်ချက်။ မချစ်ရရဲ့ တဂ်ပို့စ်ပါ... Beyonce ရဲ့ If I wereaboy ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ထားတာပါ...သည်းခံကြပါကုန်... ခုတလောအဲ့ဒီတစ်ပုဒ်ပဲ ဆိုဖြစ်တယ် အလွတ်မရသေးလို့ ကျက်နေတာ.. ဟီး နောက်အပါတ်လောက်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ပုဒ်ပြောင်းမှာပေါ့... :D
Posted by စိမ်း... 15.10.09 comments (26)
ဒီမှာ နာမည်တူနေတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိတာ သိနေတာ ကြာပါပြီ…
ကျမ ဘလော့ဂ်ထက် ရက်ပိုင်းလောက်စောနေတဲ့အတွက် ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ဆီ မေးလ်ပို့ပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်ကြည့်သေးတယ်…
စာလည်းမပြန်၊ ဘလော့ဂ်မှာလည်း ပို့စ်အသစ်တင်တာမတွေ့တော့ ဆက်မရေးဖြစ်တော့ဘူးထင်လို့ ကျမဘလော့ဂ်ကိုလည်း နာမည်မပြောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူး…
ဒါပေမယ့် ဟိုတစ်နေ့က ပို့စ်အသစ်တစ်ခုလာတင်တာတွေ့လိုက်တယ်… အဲ့ဒီတော့ နာမည်တော့ ပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်လေဆိုပြီး နာမည်ကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်… တော်တော်နဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူး… ဒါနဲ့ပဲ စိမ်း လို့ ရိုးရိုးလေး ပြောင်းဖြစ်တယ်… လိပ်စာပြောင်းရင် လင့်ခ်ထားတဲ့လူတွေ အလုပ်ရှုပ်မှာစိုးလို့ ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်…
အားလုံးပြီးလို့ ဒီပို့စ်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့မှ ပို့စ်အသစ်လည်းတင်လို့မရဘူး ဖြစ်နေလို့ Michael ကိုပြေးပြီး အပူကပ်ရသေးတယ်…( အူယားဖားယားပြေး၍ အပူနှင့်ကပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ… အကူအညီတောင်းခြင်းသက်သက်သာ…. ) Michael က ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပို့စ်တင်ပေးတယ် … အခုသူပြောပြတဲ့နည်းအတိုင်း စမ်းကြည့်ထားပါတယ်… နေ့တိုင်းသူ့ဘလော့ဂ်သွားသွား သူတင်သမျှပို့စ်တွေကိုဖတ်ဖတ်ပြီး လိုက်ကလိနေကြ…
စပါယ်ရှယ် ကျေးဇူး Michael… :)
ကဲ ဖွားကိက ပြောပါတယ် တစ်ခုခုမကျွေးဘူးလားဆိုလို့ ... စားကြပါ... သောက်ကြပါ... :)